WebThings Gateway 1.0, vhezheni inoratidza mucherechedzo weMozilla | Linux Vakapindwa muropa
WebThings Gateway 1.0, vhezheni inoratidzira rusununguko rweMozilla
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yepuratifomu yeIoT zvishandiso WebThingsGateway 1.0.
Kuva ndizvo vhezheni yakakosha, sezvo ichisimbisa kupatsanurwa kweMozilla muchirongwa chakazvimirira, chinotarisirwa nekuvandudzwa nenharaunda. Iyo kuvhurwa inonyanya kuitirwa kutamisa vashandisi kubva kuMozilla-yakabatana zvivakwa kuenda kune avo vega masevhisi.
Uye ndizvo izvozvo Nekuda kwekugadzirisa mutengo, Mozilla yakamisa kusimudzira kwemari ndokutumira chirongwa cheWebhuThings pamusoro, ichipa mukana wekushandisa zvivakwa zvayo kutora kupinda kure, kumhanyisa masevhisi egore, uye kuendesa zvigadziriso chete kuburikidza naDecember 31, 2020.
WebThings Gateway 1.0 ichagoverwa kuburikidza neMaseva eMozilla, asi zvese zvekuwedzera zvigadziridzo zvinoshandurwa kuita yako wega kugona uye kune iyo nyowani subdomain www.muropa.co.
Sechiyeuchidzo, iyo marco WebThings ine WebThings Gateway uye raibhurari yeWebhuThings.
WebThings Gateway ndeye yepasi rose yakaturikidzana kuronga kuwaniswa kwezvikamu zvakasiyana zvevatengi uye IoT zvishandiso, kuviga izvo zvakasarudzika zvepuratifomu yega yega uye isingatsvake kushandiswa kwemaitiro chaiwo kubva kune wega mugadziri. Kuti udyidzane negedhi neIoT mapuratifomu, unogona kushandisa ZigBee uye ZWave protocols, WiFi kana kunangana kwakananga kuburikidza neGPIO.
Pamusoro pekubvumidza kutama, iyo vhezheni yeWebThings Gateway 1.0 inosanganisirawo zvinotevera shanduko.
1 Main nyowani maficha eWebThings Gateway 1.0
Main nyowani maficha eWebThings Gateway 1.0
Mune iyi vhezheni nyowani iri kutenderedza kusununguka kweMozilla, inosimbiswa kuti yainayo Mozilla yekumaka yakachenesa: dhairekitori zita rakachinjwa profiles kubva ~ / .mozilla-iot kusvika ~ / .webthings, nharaunda inoshanduka MOZIOT_HOME yakapihwa zita rekuti WEBTHINGS_HOME, mozilla-iot-gateway, masevhisi akapihwa zita rekuti webthings-gateway, pakati pevamwe.
Zvakare, tinogona kuwana izvo rutsigiro rwakawedzerwa kubazi idzva reNode.js 14 chikuva. Iyo Gateway Plugin Raibhurari yeNode.js yakanyorwa zvekare muTypeScript.
Tsigiro yemumvuri sensors yakaitwa, kumanikidzwa kwemuchadenga, mhando yemhepo uye zvemukati zvehutsi, pamwe nepfuma yekufunga nezvekushandisa kwesimba kwesimba.
Yekuvandudza dhirivhari chiteshi yakawedzerwa kune iyo yekugadziriswa, ichipa mukana wekutarisa shanduro.
Pamusoro peMPEG-DASH uye HLS, rutsigiro rwakawedzerwa kune M-JPEG vhidhiyo yekukodha fomati.
Wakawedzera rutsigiro rwePodman Toolkit mune iyo Docker mufananidzo.
Wakawedzera rutsigiro rwekutsvagisa plugin.
Yakawedzerwa shanduro yemutauro weUkraine.
Kubviswa kwakavakirwa-mukati mDNS server, pachinzvimbo chekushandisa kwekunze (Avahi kana Bonjour) kunofanirwa kushandiswa.
Iyo Raspbian vhezheni inosanganisira SPI rutsigiro.
Kune avo vanofarira WebThings Gateway, vanogona kuiwana zviri nyore. Ivo vanongoda kurodha pasi firmware yakapihwa kune iyo SD kadhi yeRaspberry yako Pi.
Kuti uchengetedze iwo mufananidzo waunogona kushandisa Etcher, chinova chishandiso cheplatform.
Saizvozvowo, ichave iri mukutarisira kwekutsvaga zviripo IoT zvishandiso izvo zvinokupa iwe mukana wekugona kumisikidza parameter ekunze kuwana uye kukwanisa kuwedzera anofarirwa kwazvo zvishandiso kuchiratidziri.
Mushure mekuisa iyo yekuvandudza kubva WebThings Gateway 1.0, Vashandisi vanokurudzirwa kunyoresa pawebhuthings.io uye enda kune iyo nyowani zvigadzirwa.
Mushure mekutama, otomatiki kuendesa ekuvandudzwa uye kure kuwana kuchiri kushanda, asi zita repasi pezita re nzvimbo yekupinda ichachinja kubva * .mozilla-iot.org kuenda * .webthings.io, uye izvo zvekuvandudzwa zvichatorwa kuburikidza neiyo inomiririra api.webthings.io.
Kana iko kutama kukanzurwa, kuiswa kwemuno kucharamba kuchishanda sepakutanga, asi pasina kusungirwa kumasevhisi egore uye pasina otomatiki kuendesa ekuvandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » WebThings Gateway 1.0, vhezheni inoratidzira rusununguko rweMozilla